Lwesihlanu 18 Juni 2021
Lwesine 17 Juni 2021
Lwesithathu 16 Juni 2021
Lwesibili 15 Juni 2021
Ikhalenda Idolobhana liyiphepha lezikebhe elinezingxenye ezingabuthana ngokukhululekile ekhalendeni. Hlanganisa izakhiwo ngezindlela ezahlukahlukene futhi ujabulele ukudala idolobha lakho elincane kakhulu. Impilo enomklamo: Imiklamo yekhwalithi inamandla wokushintsha isikhala futhi iguqule izingqondo zabasebenzisi bayo. Banikeza induduzo yokubona, ukubamba nokusebenzisa. Zihlotshiswe ngokukhanya nezinto zokumangala, zicebise isikhala. Imikhiqizo yethu yoqobo yakhelwe kusetshenziswa umqondo "Wokuphila Nokwakhiwa".
Msombuluko 14 Juni 2021
Izinhlelo Zokusebenza Zokubukwa Kwamawashi
Izinhlelo Zokusebenza Zokubukwa Kwamawashi I-Tritime, i-Fortime, i-Timegrid, i-Timinus, i-Timechart, i-Timenine ziwuchungechunge lwezicelo zewashi ezenzelwe ngokukhethekile idivayisi ye-I'm Watch. Izinhlelo zokusebenza zisekuqaleni, zilula futhi zibukeka kahle ekwakhiweni, kusuka kobuzayo besitayela ngesitayela se-sci-fi kuya ekuzimiseleni kwedijithali. Yonke imidwebo yokubuka iyatholakala ngemibala engu-9 - ilungele ukuhlanganiswa kombala we-I'm Watch. Manje yisikhathi esihle sendlela entsha yokukhombisa, ukufunda nokuqonda izikhathi zethu. www.genuse.eu
Itafula Lokungena Ikhalenda Ikhalenda Ikhalenda Ikhalenda Izinhlelo Zokusebenza Zokubukwa Kwamawashi